ယေရှုက ကျွန်ုပ်သည် အမှန်တရားဖြစ်သည် - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဘုရားသခင် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ ဘုရားကျောင်း
ဆောင်းပါး > အသက်တာ၏စကားပြောသော > ယရှေုသညျငါအမှန်တရားဖြစ်၏ဟုဆိုလျက်,
သင်သိပြီး မှန်ကန်သော စကားလုံးများကို ရှာဖွေရန် ရုန်းကန်ခဲ့ရသည့် တစ်စုံတစ်ဦးကို သင်ဖော်ပြရန် လိုအပ်ပါသလား။ အဲဒါက ကျွန်တော့်အတွက် ဖြစ်ခဲ့ပြီး တခြားသူတွေလည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် သိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွင် စကားလုံးများဖြင့် ဖော်ပြရန်ခက်ခဲသော သူငယ်ချင်းများ သို့မဟုတ် အသိမိတ်ဆွေများရှိသည်။ သခင်ယေရှုသည် ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာမရှိပါ။ "မင်းကဘယ်သူလဲ" လို့မေးတဲ့အခါတောင် သူက အမြဲတမ်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ တိကျတယ်။ ဖြေဆိုရန်။ အထူးသဖြင့် ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် သူပြောထားသည့် ကျမ်းပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ကို ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်– “ငါသည် လမ်းခရီး၊ သမ္မာတရားနှင့် အသက်ဖြစ်၏။ ငါ့အားဖြင့်မှတပါး အဘယ်သူမျှ ခမည်းတော်ထံသို့ မရောက်ရ။” (ယော၊ ၁4,6).
ဤဖော်ပြချက်ကသခင်ယေရှုကိုအခြားသောဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့်သီးခြားဖြစ်စေသည်။ အခြားခေါင်းဆောင်များက "ငါသည်အမှန်တရားကိုရှာဖွေသည်" သို့မဟုတ် "ငါအမှန်တရားသင်ပေးသည်" သို့မဟုတ် "ငါအမှန်တရားကိုပြသသည်" သို့မဟုတ် "ငါအမှန်တရား၏ပရောဖက်ဖြစ်၏" ဟုပြောသည် သခင်ယေရှုသည် လာ၍“ ငါသည်သမ္မာတရားဖြစ်၏။ အမှန်တရားသည်မူတစ်ခုသို့မဟုတ်မရေရာသည့်စိတ်ကူးတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သမ္မာတရားသည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်၏။
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရေးကြီးသောအချက်သို့ရောက်ကြ၏။ ဤကဲ့သို့သောပြောဆိုချက်ကကျွန်ုပ်တို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်လျှင်၊ သူပြောသမျှကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရမည်။ သူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့မယုံလျှင်အရာရာသည်အချည်းနှီးဖြစ်သည်။ သူပြောသည့်အခြားအရာများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့မယုံကြပါ။ အဘယ်သူမျှမ downplaying ရှိပါသည်။ သခင်ယေရှုသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအမှန်တရားဖြစ်ပြီးအမှန်တရားကိုပြောဆိုသည်ဖြစ်စေ၊ နှစ် ဦး စလုံးမှားသည်။
အံ့ဩစရာ ကောင်းပေစွ။ သမ္မာတရားကိုသိခြင်းဟူသည် သူပြောသောစကားကို ငါအပြည့်အဝယုံကြည်နိုင်သည်– “အမှန်တရားကိုသိ၍ သမ္မာတရားသည် သင်တို့ကိုလွှတ်လိမ့်မည်” (ယောဟန်၊ 8,32) ပေါလုသည် ဂလာတိစကားတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား ဤသို့သတိပေးသည်– “ခရစ်တော်သည် ငါတို့ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် လွှတ်မြောက်စေတော်မူပြီ။ ( Gal. 5,1).
ခရစ်တော်ကိုသိကျွမ်းခြင်းဟူသည်အမှန်တရားတွင်သူ၌တည်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့လွတ်မြောက်ကြောင်းသိရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုစစ်ကြောစီရင်ခြင်းနှင့်လွတ်လပ်စွာသူတစ်ပါးကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအားလုံးနေ့စဉ်အသက်တာကိုသူပြသခဲ့သည့်တူညီသောအစွန်းရောက်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်လွတ်လပ်စွာပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်အုပ်စိုးမှုကိုအချိန်တိုင်းနှင့်ဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံးအပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တရားကိုသိသောကြောင့်၎င်းကို ယုံကြည်၍ ခရစ်တော်၏စံနမူနာအတိုင်းအသက်ရှင်နိုင်သည်။